कर्णालीमा हवाई उद्धार : पहुँचवालाले सुविधा पाउँछन्, निमुखाले ज्यान गुमाउँछन् – Khabar Silo
कर्णालीमा हवाई उद्धार : पहुँचवालाले सुविधा पाउँछन्, निमुखाले ज्यान गुमाउँछन्
Posted on September 7, 2019 Author admin Comment(0)
कर्णालीमा एक वर्षमा ११ गर्भवतीको उद्धार, तीमध्ये सातजना प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको हुम्लास्थित निर्वाचन क्षेत्रका
आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा दुर्गम कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेपछि सरकारले ०७१/७२ देखि हवाई उद्धार (एयर लिफ्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जटिल समस्या भएकालाई तत्काल हेलिकोप्टरमा उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याउन यो कार्यक्रम चलाएको हो । देश संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै यो कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट दोहोरो सुविधाको व्यवस्था हुँदा पनि कर्णालीका निमुखा महिला अधिकारबाट वञ्चित छन् । राजनीतिक पहुँच भएका महिलाले सेवा लिइरहेका छन्, निमुखा अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच जिल्लाका ११ गर्भवती/सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरेको तथ्यांक राखेको छ । तीमध्ये सातजना प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको हुम्लास्थित निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै छन् । यसबाहेक मुगु, डोल्पा, जाजरकोट र सुर्खेतका एक–एकजना गर्भवतीको पनि उद्धार भएको छ ।
अधिकांश जिल्लाका ग्रामीण भेगमा सरकारले हवाई उद्धारको सेवा दिइरहेको जानकारी नै छैन । जिल्ला अस्पताल पुगेका, तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएका तथा उच्च जोखिममा रहेका गर्भवती/सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सम्बन्धित अस्पतालले नै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशनालयले तत्काल प्रदेश सरकार वा संघीय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ । त्यसपछि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरेर पीडितको तत्काल उद्धार गरिन्छ । तर, अधिकांश जिल्ला अस्पतालले न पीडितलाई सेवा जानकारी गराउँछन्, न आफै उपल्लो निकायलाई जानकारी गराउँछन् । पहुँच हुने पीडितका आफन्तले भने आफै पहल पनि गर्छन् ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्–
मेरो पहुँचले हुम्लाका पीडितले हवाई सुविधा लिएका होइनन् । स्वास्थ्यमा हुम्ला सबैभन्दा पछाडि छ । अहिलेसम्म गाडी पुगेको छैन । जिल्लाभरि एउटा अस्पताल छ । अस्पताल पुग्न हिँडेर चार दिन लाग्ने माथि लिमी छ, तल रिमी छ । यता चंखेली छ । दुई महिलाले त अस्पताल पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । यस्तो पछाडि परेको ठाउँबाट धेरैले सेवा नपाएर कहाँकाले पाउँछन् त ? सिंगो कर्णाली नै विकट हो, तर हुम्लाको तुलनामा अरू जिल्लामा थोरै सुविधा छ । सबैतिर बाटो पुगेको छ । जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि सेवा दिइरहेका छन् । सबै जिल्लाका महिलाले यो सेवा पाउनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार सचेत छ । त्यसैले पहुँचको आधारमा भनसुन गरेर उद्धार गरियो भन्ने आरोप निराधार हो ।
गर्भवती/सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको डेढ करोड बजेट : २५ लाख खर्च, ७० लाख रकमान्तर गरियो, ५० लाख फ्रिज
गत आवमा कर्णाली सरकारले गर्भवती÷सुत्केरीको उद्धारका लागि करिब डेढ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, उद्धारमा २५ लाख मात्रै खर्च गरियो । दुई–दुई लाखका दरले १० जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई २० लाख दिनुका साथै ५० लाख भने जिल्ला अस्पतालका बिरामीलाई खाना खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरियो । बाँकी ५० लाख बजेट फ्रिज भयो ।
हवाई सुविधाबारे गाउँलेलाई थाहै छैन, अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् गर्भवती
कालिकोट : गत ९ साउनमा कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–४ रप्साकी ३० वर्षीया देवी सहकारी सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि जिल्ला अस्पताल पुगिन् । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको भन्दै चिकित्सकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला रेफर गरे । गम्भीर अवस्थाकी उनलाई अस्पतालले एयर लिफ्ट व्यवस्थापनमा सहयोग गरेन, उनको निमुखा परिवारलाई पनि यो सेवाबारे जानकारी भएन । गाडीमै राखेर जुम्ला लैजाँदै गर्दा देवीको बाटैमा मृत्यु भयो ।
नरहरिनाथ–७ की २० वर्षीया मीना शाहीले गत चैतमा घरमै मृत शिशु जन्माइन् । तर, साल झरेन । उनी बेहोस थिइन् । सुत्केरी भएको ६ दिनपछि परिवारले मीनालाई कालिकोट जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायो । जिल्लाले तत्काल सुर्खेत रेफर गर्‍यो । मीनाको जीवनमा पनि सरकारको हवाई उद्धार सेवा बरदान साबित हुन पाएन । गाडीबाट सुर्खेत लैजाँदै गर्दा बाटैमा उनले ज्यान गुमाइन् ।
हुम्ला : हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ सायाँकी अनरूपा टमाटालाई गत १६ साउनमा सुत्केरी बेथा लागेपछि परिवारले सायाँ स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याए । उनको उमेर पनि कलिलै थियो, साढे १५ वर्ष । पेटभित्रै बच्चाको ज्यान गयो, अनरूपा पनि रहिनन् । समयमै उपचार पाएको भए सायद बच्चा र आमा बाँच्थे ।
रुकुम (पश्चिम) : रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका–३ की २३ वर्षीया लीला विकलाई सुत्केरी हुने समय दिएको समयअघि साउन तेस्रो साता परिवारले जिल्ला अस्पताल पुर्‍याए । उनको अवस्था जटिल भएको भन्दै अस्पतालले तत्काल नेपालगञ्ज लैजान सुझाव दियो । तर, अस्पतालले हवाई उद्धारको सुविधाबारे पहल गर्नु त परको कुरा, यो सेवाबारे जानकारीसम्म दिएन । न्यून आर्थिक अवस्था भएको परिवारले नेपालगञ्ज लैजान आँट गर्न सकेन । लिलालाई घरमै फर्काइयो । केही दिनपछि उनलाई ब्याथा लाग्यो । घरमै जोखिमपूर्ण सुत्केरी गराउँदा बच्च जन्माएको डेढ घण्टामै अत्यधिक रक्तश्रावका कारण उनको ज्यान गयो ।
जाजरकोट : जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–१ धाउनेकी २५ वर्षीय संगीता सिंह (शाही)लाई पाँच दिनदेखि व्यथाले च्यापेको थियो । बच्चा पाउने समयभन्दा सात दिन कटिसकेको थियो । तर, व्यथाले च्यापेपछि उनी झन्डैझन्डै बेहोसकै अवस्थामा पुगिन् । अन्तिम समयमा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर त आयो तर हेलिकोप्टरमा चढाउनुबित्तिकै उनले शिशु जन्माइन् । बच्चाको एकै छिनमा मृत्यु भयो, आमा गम्भीर छिन् ।
सल्यान : सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–८ की १७ वर्षीया मोती परियारलाई गत असारमा घरमै बेथा लाग्यो । तर, परिवारमा स्वास्थ्य चेतनाका कमीका कारण अस्पताल लगेनन् । उनी २४ घन्टासम्म घरमै बेहोस भइन् । त्यसपछि मात्रै एम्बुलेन्समा जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइएकी उनको अवस्था नाजुक भइसकेको थियो । चिकित्सकले पेटभित्रै शिशुको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरे । अत्यधिक रक्तश्राव भएर गम्भीर अवस्थामा रहेकी परियारलाई तत्काल सेनाको हेलिकोप्टर मगाएर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याइयो । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेका प्रदेश अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाको अग्रसरतामा हेलिकोप्टर व्यवस्थापन भएको थियो । उनको ज्यान जोगियो । हेलिकोप्टर खर्च प्रदेश सरकारले नै व्यहोरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ। समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको साइत उत्तम रहेको उनले बताए। कात्तिक १२ गते मङ्गलबार दिनभर टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत […]
‘रंगशाला निर्माणपछि पैसा मागेर काम गर्दिन’
काठमाडौं । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिरहेका कलाकार तथा सामाजिक अभियान्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसले रंगशाला निर्माण भए पछि अब पैसा मागेर काम नगर्ने बताएका छन् । पैसा मागेर काम गर्ने काम यो नै अन्तिम भएको सीताराम बताउँछन् । “अब उप्रान्त म मागेर कुनै पनि काम गर्ने वाला छैन । यो अन्तिमपटकको अपिल हो,” […]
नेपालको दोस्रो लामो पुल, सम्झौता भएको चार महीना अघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न
तुलसीपुर। नेपालकै दोस्रो ठूलो पुल निर्माणकार्य पूरा भएको छ । दाङको राप्ती नदीमा निर्माण भएको राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियाँ र महादेवा जोड्ने पुल निर्माणको काम पूरा भएको हो। ८६० मिटर लम्बाइ र साढे १० मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुल करीब रु एक अर्ब लगानीमा निर्माण पूरा भएको हो। अनक निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि निर्माणकार्य […]
अस्ट्रेलिया जाने चक्करमा सुन्धारामा दुई रात सँगै बसे, युवक शौच गएका बेला युवतीले उनको मोबाइलमा जे देखिन !
संखुवासभा घट्ना प्रकरण : यिनै रहेछन् ५ जना जस्ले कार्की परिवारलाई एकै ठाउँमा सके